Mareykanka oo war ka soo saaray dagaalada dhexmaray qowmiyada oromad iyo somalida. | Raascawad
Mareykanka oo war ka soo saaray dagaalada dhexmaray qowmiyada oromad iyo somalida.
Addis ababa(Raascawad Media)_Safaarada dowladda mareykanka ee magaalada Addis ababa ayaa war qoraal ka soo saartay dagaaladi iyo colaadihii dhawaan gudaaha dalka Itoobiya ku dhexmaray qowmiyada oromada iyo soomaalida.
Warkaasi ayaa waxaa lagu sheegay dhibaatadii ka dhexday xadka labo qowmiyadood gaar ahaan magaalada harar oo la sheegay in dad fara badan lagu dilay kumanaan ruux oo labada dhinac ahna ay ku barakaceen.
Dowladda mareykanka ayaa Itoobiya ugu baaqday in ay baaritaan dheeraad ah ku sameeyaan tacadiyadii iyo rabshadihii halkaasi ka dhacay isla markaana ay ka shaqeyso sidii nabad loogu soo celin deegaanada ay dagaalada ka dhaceen loona dhameyn lahaa xasaradaha halkaasi ka aloosan.
Safaarada mareykanka ayaa nasiib daro ku tilmaantay coladihii dhawaan qowmiyada somalida iyo oromada ku dhexmaray dowlada Itoobiya iyadoo tilmaantay in ay halkaasi ka dhaceen xadgudubyo dhinaca aadanaha aha.
Ku dhawaad 60,000 oo ruux oo isagu jira labada dhinaca ayaa ka barakacay colaadihii halkaasi ka dhacay iyadoo tiro ka badan 50 ruux ay ku geeriyoodeen dagaaladii ka dhacay gudaha dalka Itoobiya.
Dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo madaxda maamulada oromda iyo somaliya ayaa dhawaan sheegay in wadaan dagaal lagu soo afjarayo colaadihii qasaaraha ba.an gaytay ee ka dhacay dalka Itoobiya